Tiger Shroff Oo Rohit Shetty Xafiiskisa Maanta Lagu Arkay Film Action Ayaa Wadada Kusoo Jiro (+Sawiro) – Filimside.net
Tiger Shroff Oo Rohit Shetty Xafiiskisa Maanta Lagu Arkay Film Action Ayaa Wadada Kusoo Jiro (+Sawiro)
Filmsameye Rohit Shetty waxuu noqday filmsameyaha xiligaan laga daba dhacay aflaamtiisana garansiiyo 100% guulestaan waqtigaan waxuuna ku caan baxay sameenta filmada Action ama dagaal ah.
Rohit waxaa tiyaatarada u saaran filmkiisa Simmba ee fariintiisa Action-ka tahay Ranver Singh-na hogaamiye ka yahay waxuuna noqday Blockbuster isagoo 200 Crore ka badan Box-office-ka ka keenay.
Hadaba xidigaha caanka ah ayaa Filmsameyahan jecel hader oo doonayaan inee filmadiisa hogaamiye ka noqdaan waxaa dhowaan la sheegay in Ajay Devgan film u sameen doono halka Aksha Kumar ay wada saxiixdeen mashruuc cusub.
Markaana waa atooraha liiska atoorayaasha Action-ka sameeyan soo galay ee Tiger Shroff kaaso 2018 wacdaro weyn ka dhigay mashruucisa Baaghi 2 ee Blockbuster-ka weyn noqday.
Waxaa maanta la arkay Tiger Shroff oo sii galaya hadana kasoo baxaya xafiiska Rohit Shetty kulan ayee goobta kuwada qaaten waxaana la sheegay in ay ka wada hadleyeen film cusub oo ay wada sameen doonan.
Maqribkii xiliga hindiya ayuu kasoo tagay xidigaan goobta oo sawiro looga soo qabtay isagoo kaso baxaya xafiiska Rohit Shetty waxaa la wada sugaaba waa filmkaan la isla dhexmaraayo haduu xaqiiq noqdo kaaso ay xidigahan maanta wada hadalkiisa kudheeradeen.